I-Perricone MD yandisa i-Hypoallergenic CBD yoQokelelo loNyango lweSikhumba
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Cofa apha ukuba le ngxelo yakho! » I-Perricone MD yandisa i-Hypoallergenic CBD yoQokelelo loNyango lweSikhumba
I-Perricone MD, uphawu olwenza impumelelo, izisombululo zesayensi ezixhaswe yinzululwazi, ibhengeza ukongezwa kwayo kwangoku kwiHypoallergenic CBD Collection of Therapy Collection kunye ne-Ultra-Smooth Clean Shave Cream.
Ngokwahlukileyo kwingqokelela, zonke iimveliso zine-99% yeCanabidiol (CBD) emsulwa, efungelwe eMelika, njengesona sithako siphambili. I-CBD, eyaziwa ngezibonelelo zayo ezithobayo, inceda ukuvuselela nokuzola ulusu olunengxaki kunye noxinzelelo.
I-Ultra-Smooth Clean Shave Cream inezinto ezinobunkunkqele obunobunkunkqele obudala indawo ethe tyaba yokucheba okucocekileyo nokucocekileyo. I-Cannabidiol isebenza ngaphandle komthungo kunye ne-cannabis sativa yeoyile yembewu kunye ne-allantoin yokuhambisa amanzi kunye nokuthambisa ulusu ngokunyusa ngokunzulu ulusu lolusu olusele lukhangeleka luthambile kwaye luthambile ngamanqatha ambalwa, amaqhuma kunye nokusikwa okuncinci. Le fomyula yasimahla yesulfate ayisiyi-comedogenic, vegan, kuvavanywa ugqirha wesikhumba, kwaye yamkelwe yiSizwe sePsoriasis Foundation kunye nephaneli yayo yeengcali.
Ekupheleni konyaka we-2021, i-Perricone MD iya kuqhubeka nokwandisa ingqokelela ngokusungulwa kwe-Hypoallergenic CBD Therapy Skin Therapy ye-Ultra-Lightweight Calming SPF 35 Veil. Esi sikhuseli selanga esisekwe kwizimbiwa sikhusela ulusu kwimitha eyingozi ye-UVA kunye ne-UVB ngelixa lizolisa kwaye lithobisa ulusu.
"Ngokusungulwa kweqoqo le-Hypoallergenic CBD ye-Skin Therapy Collection ngo-2020, siyaqhubeka nokuba phambili kwi-CBD entsha ukususela ekuqaleni kwethu kunye nesithako ngo-2017." Utsho uRobert Koerner, iGosa eliyiNtloko lezeNtengiso lika-Perricone MD. "Ngeentengiso ze-CBD ezigcina ulusu ngokuqhubeka nokukhula ngesantya esikhawulezayo, sonwabile ukuzisa ezi zinto zimbini zintsha zodidi, ngelixa sigcina ukuzibophelela kwethu ekuqinisekiseni ukuba zonke iifomula kule franchise zicocekile, zithambile kwaye zisebenza kakuhle."
Yonke ingqokelela yePerricone MD Hypoallergenic CBD yoQokelelo loNyango lolusu yamkelwe kwaye yamkelwa yiSizwe sePsoriasis Foundation. Ngolu kongezwa, umgca opheleleyo wanamhlanje wePerricone MD Hypoallergenic CBD Collection of Therapy Collection iqatshelwa yiSizwe sePsoriasis Foundation. "I-National Psoriasis Foundation Seal of Recognition ichonga iimveliso ezenziweyo okanye ekujongwe ukuba zingacaphukisi kwaye zikhuseleke kubantu abaphila ne-psoriasis kunye ne-psoriatic arthritis," utshilo uRandy Beranek, uMongameli kunye ne-CEO, i-National Psoriasis Foundation. "Sinovuyo lokuba ekugqibeleni sibe nekhrimu yokucheba eyamkelweyo kuLuhlu lweMveliso yoVavanyo."
Iziphumo ziyathetha. Kuvavanyo lwabathengi, iipesenti ezingama-97 zabavavanyi bathi ayicaphukisi *, iipesenti ezingama-94 zathi kuthintela ukutshiswa kwentsimbi, iinyongo kunye nokusikwa okuncinci *, kunye ne-92% yathi ivumela ukushefa okusondeleyo kunye nokukhululeka *.
* Ngokusekwe kuphononongo lwabathengi abangama-196 amadoda nabafazi emva kosuku olunye